အရသာလည်းရှိ အိမ်မှာလည်း အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကင်းမွန်အစာသွပ် (၂)မျိုး -
အရသာလည်းရှိ အိမ်မှာလည်း အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကင်းမွန်အစာသွပ် (၂)မျိုး
Posted on January 7, 2019 January 8, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
ဂျပန် ကင်းမွန်ကောက်ညှင်းအစာသွပ်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ကင်းမွန်အစာသွပ်နည်းတွေနော်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် အထူးဟင်းလျာတစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ အစာသွပ် ကင်းမွန်ကို နိုင်ငံအလိုက် စတိုင် နှစ်မျိုးနဲ့ ချက်ပြမှာ.. အဲလေ.. ဖော်ပြသွားမှာပါ။ လူမျိုး တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး လုပ်စားကြပုံချင်း မတူပေမဲ့ အရသာရှိတာတော့ တူတယ်လေနော် 😜
ဂျပန် ကင်းမွန်ကောက်ညှင်း အစာသွပ်
ဂျပန်မှာတော့ Ika-meshi လို့ခေါ်ပြီး ကောက်ညှင်းအစာသွပ် ကင်းမွန် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်စတိုင် လုပ်စားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့….
ကောက်ညှင်းဆန် တစ်ဘူး၊ ကင်းမွန် အကြီးကြီး ၃ကောင်၊ ထမင်းစားပန်းကန်လုံးအသေးနဲ့ ပဲငံပြာရည်တစ်ခွက်၊ Miirin လို့ ခေါ်တဲ့ ဟင်းချက်ရာမှာ သုံးတဲ့ ဂျပန်ဆန်အရက် တစ်ခွက်နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
mirin ဝယ်ရခက်နေရင် သံပုရာရည်ကို အစားထိုးသုံးနိုင်ပါတယ်နော်။
ပထမအဆင့်က ကင်းမွန်ရဲ့ အတွင်း ကလီစာအပိုင်းတွေကို ဆွဲထုတ်ပြီး ရေစင်စင်ဆေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ပုံထဲကအတိုင်း လှီးဖြတ်ထားရပါမယ်။ ခြေလက်တွေကို အပိုင်းပိုင်း လှီးပါမယ်။
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ကင်းမွန်ထဲကို ကောက်ညှင်းဆန်အစိမ်းထည့်ပြီး အစာသွပ်ပါမယ်။ အပြည့်မသွပ်ဘဲ တုတ်ထိုးပြီး ပိတ်ဖို့ တစ်လက်မခွဲလောက် နေရာလေး ချန်ထားပေးပါနော်။ ဆန်တွေ ထွက်မကျအောင် ပုံထဲကလို သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ ပိတ်ရပါမယ်။
တတိယအဆင့်ကတော့ ချက်ပြုတ်ခြင်းအဆင့်ပါ။ အိုးထဲကို ကင်းမွန်အစာသွပ်တွေ ထည့်ပြီး ပဲငံပြာရည်ရယ် Mirin ရယ် လောင်းထည့်ပါမယ်။ ကင်းမွန်ရဲ့ အတွင်း ကိုယ်ထည်ကိုလည်း တစ်ခါတည်း ထည့်ချက်ပါမယ်။
ပြီးရင် ကင်းမွန်တွေ မြုပ်သွားတဲ့အထိ အိုးထဲကို ရေထည့်ပါမယ်။ မီးအသင့်အတင့်နဲ့ အပူပေးပြီးသကာလ ရေတွေ ခန်းသလောက် ရှိသွားရင်တော့ အိုးပေါ်ကချ၊ ကြက်သွန်မြိတ်လေး ဖြူးပြီး စားလို့ရပါပြီ ယောင်းတို့ရေ….
Related article >>> အရသာရှိတဲ့ ကင်မ်ချီပန်ကိတ်ကို အိမ်မှာတင်လွယ်လွယ် လုပ်စားကြည့်ရအောင်
ဒုတိယနည်းကတော့ ဖိလစ်ပိုင်ဟင်းလျာ အတိုင်း ချက်နည်းပါ။ ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့ Rallenong Pusit လို့ ခေါ်တဲ့ ကင်းမွန်အစာသွပ် ဟင်းလျာဟာ ဖိလစ်ပီနိုတွေ စပိန်ကိုလိုနီ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့တုန်းက စပိန်တွေဆီကနေ အမွေဆက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ဟင်းလျာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်းမွန် ၅ ကောင်၊ တရုတ်နံနံ နှစ်စည်း ( အရွက်တွေ ဖယ်ပြီး အရိုးပဲယူပါတယ်၊ အရိုးကို တောက်တောက်စင်းထားပါမယ် ) ပဲငံပြာရည် ခွက်ဝက်၊ အပိုင်းပိုင်း လှီးထားတဲ့ မုန့်လာဥနီ ဥကြီး တစ်ဥ၊ အတုံးသေးလေးတွေ လှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံး၊ တောက်တောက်စင်းထားတဲ့ ဝက်သား တစ်ခွက်၊ ဂျုံမှုန့် ခွက်ဝက်၊ အတုံးငယ်လေးတွေ လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီ တစ်ဥ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၃တက်၊ ကြက်ဥတစ်လုံး၊ သံပုရာသီးတစ်လုံး၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနက် နဲ့ ဆား ပဲဖြစ်ပါတယ် (အမလေး…များထှာ)
ပထမအဆင့်ကတော့ ကင်းမွန်တွေကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး ပန်းကန်ထဲမှာ ပဲငံပြာရည်နဲ့ သံပုရာရည် ညှစ်ထည့်ပြီး ၁၅မိနစ်လောက် နှပ်ထားပါမယ်။
နှပ်နေတုန်းကာလမှာ ဒယ်အိုးထဲ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး လှီးဖြတ်ထားတဲ့ အသီးအရွက်အသားတွေ အားလုံး ထည့်ကြော်ပါမယ်။ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ဆား အနည်းငယ် ထည့်ပါမယ်။ မီးကို အသင့်အတင့်ပဲထားပြီး ဝက်သားအရောင်ပြောင်းလို့ ကျက်သွားတဲ့အခါ အိုးပေါ်က ချပါမယ်။
ပြီးတာနဲ့ အစာသွပ်ခြင်း လုပ်ငန်း စတင်ပါပြီ။ အပြည့်မသွပ်ဘဲ နေရာအနည်းငယ်ချန်ပြီး သွားကြားထိုးတံနဲ့ ပိတ်ပါမယ်။ ပိတ်ပြီး သွားတဲ့ အစာသွပ်ကင်းမွန်တွေကို ကြက်ဥကပ်၊ ဂျုံမှုန့်ကပ်ပြီးရင်တော့ ဆီပူထဲထည့်ကြော်ပါမယ်။
မီးအသင့်တင့် ပဲ ထားရပါမယ်။ ရွှေရောင်သန်းလာရင်တော့ အိုးပေါ်က ချပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်…
ကဲ.. ဒီ ကင်းမွန်အစာသွပ် ၂ မျိုးကတော့ သွပ်တဲ့ အစာချင်း မတူသလို ချက်ပြုတ်ပုံချင်းလည်း မတူတာကြောင့် ထူးခြားတဲ့ အရသာ၂မျိုးကို ခံစားရစေမှာပါ။ ပင်လယ်စာကြိုက်တတ်တဲ့ ယောင်းတွေအတွက်ကတော့ ၂ မျိုးလုံး ဖေးဗရိတ်ဖြစ်လောက်တယ်။
Photo credit : panlasangpinoyrecipes ,foodfornet
Ref : panlasangpinoy.com, adbp.ph
ဂပြနျ ကငျးမှနျကောကျညှငျးအစာသှပျနဲ့ ဖိလဈပိုငျ ကငျးမှနျအစာသှပျနညျးတှနေျော
ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ပငျလယျစာကွိုကျတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ အထူးဟငျးလြာတဈမြိုးနဲ့ မိတျဆကျပေးလိုပါတယျ။ အစာသှပျ ကငျးမှနျကို နိုငျငံအလိုကျ စတိုငျ နှဈမြိုးနဲ့ ခကျြပွမှာ.. အဲလေ.. ဖျောပွသှားမှာပါ။ လူမြိုး တဈမြိုးနဲ့ တဈမြိုး လုပျစားကွပုံခငျြး မတူပမေဲ့ အရသာရှိတာတော့ တူတယျလနေျော 😜
ဂပြနျ ကငျးမှနျကောကျညှငျး အစာသှပျ
ဂပြနျမှာတော့ Ika-meshi လို့ချေါပွီး ကောကျညှငျးအစာသှပျ ကငျးမှနျ လို့ ချေါပါတယျ။ ဂပြနျစတိုငျ လုပျစားဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့….
ကောကျညှငျးဆနျ တဈဘူး၊ ကငျးမှနျ အကွီးကွီး ၃ကောငျ၊ ထမငျးစားပနျးကနျလုံးအသေးနဲ့ ပဲငံပွာရညျတဈခှကျ၊ Miirin လို့ ချေါတဲ့ ဟငျးခကျြရာမှာ သုံးတဲ့ ဂပြနျဆနျအရကျ တဈခှကျနဲ့ ကွကျသှနျမွိတျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
mirin ဝယျရခကျနရေငျ သံပုရာရညျကို အစားထိုးသုံးနိုငျပါတယျနျော။
ပထမအဆငျ့က ကငျးမှနျရဲ့ အတှငျး ကလီစာအပိုငျးတှကေို ဆှဲထုတျပွီး ရစေငျစငျဆေးရပါမယျ။ ပွီးရငျ ပုံထဲကအတိုငျး လှီးဖွတျထားရပါမယျ။ ခွလေကျတှကေို အပိုငျးပိုငျး လှီးပါမယျ။
ဒုတိယအဆငျ့ကတော့ ကငျးမှနျထဲကို ကောကျညှငျးဆနျအစိမျးထညျ့ပွီး အစာသှပျပါမယျ။ အပွညျ့မသှပျဘဲ တုတျထိုးပွီး ပိတျဖို့ တဈလကျမခှဲလောကျ နရောလေး ခနျြထားပေးပါနျော။ ဆနျတှေ ထှကျမကအြောငျ ပုံထဲကလို သှားကွားထိုးတံလေးနဲ့ ပိတျရပါမယျ။
တတိယအဆငျ့ကတော့ ခကျြပွုတျခွငျးအဆငျ့ပါ။ အိုးထဲကို ကငျးမှနျအစာသှပျတှေ ထညျ့ပွီး ပဲငံပွာရညျရယျ Mirin ရယျ လောငျးထညျ့ပါမယျ။ ကငျးမှနျရဲ့ အတှငျး ကိုယျထညျကိုလညျး တဈခါတညျး ထညျ့ခကျြပါမယျ။
ပွီးရငျ ကငျးမှနျတှေ မွုပျသှားတဲ့အထိ အိုးထဲကို ရထေညျ့ပါမယျ။ မီးအသငျ့အတငျ့နဲ့ အပူပေးပွီးသကာလ ရတှေေ ခနျးသလောကျ ရှိသှားရငျတော့ အိုးပျေါကခြ၊ ကွကျသှနျမွိတျလေး ဖွူးပွီး စားလို့ရပါပွီ ယောငျးတို့ရေ….
Related article >>> အရသာရှိတဲ့ ကငျမျခြီပနျကိတျကို အိမျမှာတငျလှယျလှယျ လုပျစားကွညျ့ရအောငျ
ဒုတိယနညျးကတော့ ဖိလဈပိုငျဟငျးလြာ အတိုငျး ခကျြနညျးပါ။ ဖိလဈပိုငျမှာတော့ Rallenong Pusit လို့ ချေါတဲ့ ကငျးမှနျအစာသှပျ ဟငျးလြာဟာ ဖိလဈပီနိုတှေ စပိနျကိုလိုနီ လကျအောကျ ကရြောကျခဲ့တုနျးက စပိနျတှဆေီကနေ အမှဆေကျခံရရှိခဲ့တဲ့ ဟငျးလြာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကငျးမှနျ ၅ ကောငျ၊ တရုတျနံနံ နှဈစညျး ( အရှကျတှေ ဖယျပွီး အရိုးပဲယူပါတယျ၊ အရိုးကို တောကျတောကျစငျးထားပါမယျ ) ပဲငံပွာရညျ ခှကျဝကျ၊ အပိုငျးပိုငျး လှီးထားတဲ့ မုနျ့လာဥနီ ဥကွီး တဈဥ၊ အတုံးသေးလေးတှေ လှီးထားတဲ့ ခရမျးခဉျြသီး တဈလုံး၊ တောကျတောကျစငျးထားတဲ့ ဝကျသား တဈခှကျ၊ ဂြုံမှုနျ့ ခှကျဝကျ၊ အတုံးငယျလေးတှေ လှီးထားတဲ့ ကွကျသှနျနီ တဈဥ၊ ကွကျသှနျဖွူ ၃တကျ၊ ကွကျဥတဈလုံး၊ သံပုရာသီးတဈလုံး၊ ငရုတျကောငျးမှုနျ့ အနကျ နဲ့ ဆား ပဲဖွဈပါတယျ (အမလေး…မြားထှာ)
ပထမအဆငျ့ကတော့ ကငျးမှနျတှကေို ရစေငျစငျဆေးပွီး ပနျးကနျထဲမှာ ပဲငံပွာရညျနဲ့ သံပုရာရညျ ညှဈထညျ့ပွီး ၁၅မိနဈလောကျ နှပျထားပါမယျ။
နှပျနတေုနျးကာလမှာ ဒယျအိုးထဲ ဆီအနညျးငယျထညျ့ပွီး လှီးဖွတျထားတဲ့ အသီးအရှကျအသားတှေ အားလုံး ထညျ့ကွျောပါမယျ။ ငရုတျကောငျးနဲ့ ဆား အနညျးငယျ ထညျ့ပါမယျ။ မီးကို အသငျ့အတငျ့ပဲထားပွီး ဝကျသားအရောငျပွောငျးလို့ ကကျြသှားတဲ့အခါ အိုးပျေါက ခပြါမယျ။
ပွီးတာနဲ့ အစာသှပျခွငျး လုပျငနျး စတငျပါပွီ။ အပွညျ့မသှပျဘဲ နရောအနညျးငယျခနျြပွီး သှားကွားထိုးတံနဲ့ ပိတျပါမယျ။ ပိတျပွီး သှားတဲ့ အစာသှပျကငျးမှနျတှကေို ကွကျဥကပျ၊ ဂြုံမှုနျ့ကပျပွီးရငျတော့ ဆီပူထဲထညျ့ကွျောပါမယျ။
မီးအသငျ့တငျ့ ပဲ ထားရပါမယျ။ ရှရေောငျသနျးလာရငျတော့ အိုးပျေါက ခပြွီး သုံးဆောငျလို့ရပါပွီနျော…
ကဲ.. ဒီ ကငျးမှနျအစာသှပျ ၂ မြိုးကတော့ သှပျတဲ့ အစာခငျြး မတူသလို ခကျြပွုတျပုံခငျြးလညျး မတူတာကွောငျ့ ထူးခွားတဲ့ အရသာ၂မြိုးကို ခံစားရစမှောပါ။ ပငျလယျစာကွိုကျတတျတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျကတော့ ၂ မြိုးလုံး ဖေးဗရိတျဖွဈလောကျတယျ။
Tagged Food, ike meshi, japan, Philippines, Rallenong Pusit, Recipe, squid, stuff
Posted on July 2, 2018 Author Akari
အာရုံစူးစိုက်မှုေ​ကာင်းမွန်စေသော အစားအစာများ
Posted on August 20, 2018 Author Wathun
Posted on March 25, 2018 Author Akari